Natiijooyinka Cayaaraha Africa 2015 - BBC News Somali
Natiijooyinka Cayaaraha Africa 2015
26 Jannaayo 2015
Tartanka kubadda cagta Qaramada Qaaradda Africa ee 2015, ayaa wareegga koowaad ee Group-yada ama qaybaha uu gabagabo ku dhow yahay. Cayaarihii ugu dambeeyay shalay kooxaha Congo iyo Equatorial Guinea ayaa soo baxay markii Congo 2-1 uga badisay Burkina Faso, iyadoo Equatorial Guinea-na ay garaacday kooxda Gabon.
Group-kan A, ayaa hadaba waxaa ka soo baxay Conto iyo Equatorial Guinea oo u gudbay wareegga Quarter final-ka ee sideedda koox isugu soo haraan.
Group-ka B, Tunisia ayaa ku hogaaminaysa 4 dhibcood, balse caawa ayay la cayaaraysaa kooxda DR Congo oo 2 dhibcood leh halka Cape Verde oo iyaduna laba dhibcood leh ay kulmayaan kooxda Zambia oo dhibic kaliya leh.
Tunisia dhibic kaliya ayay u baahan tahay si ay u soo baxdo, halka sadexda koox ee kale ay dhamaan u baahan yihiin in ay badiyaan si ay rajo soo bixitaan u yeeshaan.
Kooxaha ku jira Group C, beri ayay kulmayaa, Senegal iyo Algeria way is arkayaan, South Africa iyo Ghana.
Group-kan C, aad looma kala foga inkastoo Senegal ay leedahay 4 dhibcood, Ghana iyo Algeria ayaa mid hal badis wata oo tiiba ay leedahay sadex dhibcood halka South Africa ay leedahay dhibic kaliya.
Afartan koox dhabaac fursad way u haystaan in ay soo baxaan, balse Senegal ayaa ugu rajo wanaagsan oo u baahan dhibic kaliya in ay ka hesho Algeria, Ghana iyo Algeria hadii ay barbarro galaan, Ghana ayaa soo baxaysa, rajadeedu waxay ku xirnaanaysaa Senegal iyo Algeria oo midood goolal badan looga badiyo.
Arbacada oo ay soo dhamaystirmayaan kooxaha soo baxaya, ayaa Group D, kooxaha ku jiraa ay kulmayaan. Cameroon waxay iska hor imaanayaa Ivory Coast, halksa Guinea iyo Mali ay wada cayaarayaan kooxda dalka Mali.
Group-ka waa kan ugu mucjisada badan oo ilaa hadda koox koox kale ka badisay ma jirto. Ivory Coast. Cameroon iyo Guinea gool iyo gool ayay kula baxeen, Ivory Coast iyo Mali gool iyo gool ayay ku kala baxeen. Guinea iyo Ivory Coast, barbaro 1-1 ayay isla dhaafi waayeen, halka Mali iyo Cameroon ay iskula dhaceen 1-1.
Koox walba laba gool ayay dhalisay, koox walba laba dhibcood ayay leedahay. Su’aashu waxay tahay cayaaraha gabagabada group-ka ee Arbacada ma kala badin doonaan?